China Polyurethane inonama glue fekitori nevatengesi | DESAY
Magadzirirwo: 0.125L, 0.5L, 1.3KG, 5KG, 10KG, 25KG
Ruvara rwekunze: bhurawuni
Solid zvemukati: 65%
(1) pretreatment: pemvura namira iri kucheneswa.
(2) sizing: shandisa sawtooth inokwenenzvera kuisa iyo glue pamusoro peiyo yakanamatira zvakaenzana, zvakare inogona kushandisa mekutenderera rolling kupfeka, haigone kushandisa brashi bhurasho (glue viscosity yakakura), kukwesha huwandu hweinenge 250g / m2, yakatarwa zvinoenderana mamiriro chaiwo anodzora huwandu hweglue.
(3) rinoumba: mushure guruu anogona kuva rinoumbwa namira.
(4) post-kurapwa: nekuti ichi chinamato chinoputira, kana iyo yekunamatira yaporeswa, iyo glue inogona kudhonzwa muiyo diki gomba rekunamatira, inoita basa rekusimbisa, kuwedzera simba rekubatanidza, uye rinofanira kumanikidzwa mushure mekurapa.
Chigadzirwa zita re polyurethane inopupuma
Rudzi rwePU - 90
Chitarisiko chevara chine shava
Kurapa nguva 60 maminetsi
chigadzirwa zita Polyurethane inonamira Zita reBrand kuneta
mhando PU Viscosity（MPA.S) 6000-8000
Magadzirirwo 0.125L、0.5L、1.3KG、5KG、10KG、25KG Kurapa nguva 0.5-1h
Ruvara rwekunze bhurawuni Pasherufu hupenyu Mwedzi gumi nembiri
Solid zvemukati 65%
Iine hunhu hwekuita kwepamusoro, kuvakwa kwakanaka, kupupa furo mushure mekurapa, kusagadzikana uye kusagadzikana, kukwirira uye kwakadzika kupisa tembiricha.
Kugadzirwa kwemikova isingadziviri moto, madhoo anodzivirira kuba, masuo edzimba, zvishandiso zvinotonhora, uye zvakasiyana siyana zvinopisa moto uye zvinopisa zvekuisa (dombo shinda, zvedongo makushe, Ultra-yakanaka girazi shinda, polystyrene foam plastiki, nezvimwewo) zvinoshandiswa yekubatana. Yesimbi kunamatira simbi.
1. Musimboti wekurapa: Ichi chinamatira chinhu chimwe chete chinonamira-chisina chinamatira, icho chinorapwa nehunyoro hunopinza mumhepo uye pamusoro pechokunamatira.
2.Surface kurapwa kweye kutevedzera: bvisa mafuta uye guruva pamusoro pechokuita. Mafuta akawandisa anogona kucheneswa neacetone kana xylene. Kana pasina mafuta stain, hazvidiwe kuchenesa. Nguva, kana zvichidikanwa, pfapfaidza hushoma hwemhute yemvura pane irabha pamusoro ne sprayer.
3.Glue kupfeka: Shandisa zigzag chinokwenenzvera kuita zvakaenzana kuisa glue pane pamusoro pecompend. Mechanical glue inogona zvakare kuiswa, asi kukwesha hakudiwe (girisi viscosity yakakura), uye huwandu hwekupfeka huri pamusoro pe150-250g / ㎡. Iko pamusoro pesungiriro kunogona kuderedzwa zvishoma, uye kumeso kwekukwirisa kunogona kuwedzerwa zvishoma, ndiko kuti, sekureba sekunge zvivakwa zviviri zvinonamira uye zvichikwanisa kubata zvakazara glue, iyo yakaderera iyo huwandu hwekuputira, zvirinani, nekuti yakanyanya glue inoiswa, hunyoro hunoputirwa pamusoro pechidzitiro hwakatemwa, zvinova zvinokanganisa nguva yekurapa. Kana huwandu hweglue hwaiswa hunodiwa, hushoma hwemhute yemvura inogona kumwayiwa zvakakodzera.
4.compound: inogona kunamwa
5.Post-kurapwa: Nekuda kwekupupira furo yerabha iyi, kana iyo yekunamatira rukoko yaporeswa, iyo glue inogona kudonhedza pasi ma micropores eamatira, iyo inotamba chinomira uye inowedzera simba rekubatanidza. Izvo zvinhu zvakaumbanidzwa uye zvinogona kusunungurwa mushure mekurapa (kumanikidza kuri nezve 0.5kg-1kg / cm2).
6.Tool yekuchenesa inogona kushandisa ethyl acetate solvent.
1 、 Shandisa serrated spatula yekutsvaira, senge ndiro yakatsetseka. Nekudaro, kana iyo glue ikaiswa zvakanyanya, hapazovi nechau yakasara pane yekumhara pamusoro. Kana iyo glue ikaiswa zvakareruka, iyo glue ichave yakawandisa marara. Iyo zigzag scraper yakangooma sezvazviri, uye iyo glue yakasara neiyo sawtooth yakawanda.
2, Nzvimbo mbiri dzekubatanidza dzinofanira kusunganidzwa dzinofanira kunamirwa kune rumwe rutivi.
Ichi chigadzirwa chinofanira kuchengetwa munzvimbo inotonhorera uye ine rima panguva yekuchengetedza. Kazhinji mumatura epamba, nguva yekuchengetedza igore rimwe. Mushure mekushandisa kwega kwega gundi, dhiramu ine glue yakawandisa inofanirwa kuvharwa nekuchengetwa, uye iyo yekumusoro yeglue mvura ichasimbisa nekukura nekuda kwekupinda kwehunyoro. Kana ikasashandiswa kwenguva yakareba, inofanira kuvharwa ne nitrogen.
Pashure: Chinyorwa Chisimbiso Glue
Zvadaro: Maviri-chikamu bhodhi guruu